Sanduuqa Maalgashiga Dhismooyinka Guri | Sanduuqa Global Real Estate - REICG
Maal Gelinta Iibsiga Reila hindisay®
Sanduuqa Maalgashiga Dhismeyaasha Ganacsi ee Mareykanka
Akhriso On ...
Aqbalaada maalgashadayaasha aan Mareykan aheyn MALAGA 1AAD
Falsafada maalgashi ee REI waxa ay la mid tahay qaabka Warren Buffet,
"Waqtigeena ugu wanaagsan ee aan qabanayno waa weligeed".
Waxaan iibsaneynaa hanti ma guurto oo ganacsi oo waxaan haysannaa… weligood! Dhammaan dakhliga kirada ayaa dib loo maalgelin doonaa si loo iibsado guryo badan oo ganacsi, iyadoo kor u qaadeysa qiimaha kan sanduuqa maalgashiga guryaha qadarin.
Waxaan soo iibsaneynaa guryo ganacsi oo ganacsi oo aan qabaneyno… Dhammaan dakhliga kirada ayaa dib loo maalgelin doonaa si loo iibsado guryo badan oo ganacsi, iyadoo sii kordheysa qiimaha sanduuqa.
Sidee REICG Santuuqa Maaliyadeed ee Ganacsi Loogu Kala Duwan Yahay?
Inta badan lacagaha maalgashiga dhismaha ayaa u qaybiya soo celinta mid ka mid ah laba dariiqo, midkoodna iyada oo loo marayo qaybinta / saami qaybsiga ama iyada oo loo marayo dheecaanka hantida salka ku haysa.
REICG waxay dib u maalgalineysaa socodka lacagta ee ka soo xaroonaysa iibkeenna guryaha si aan u iibsado guryo badan. Habka maalgashigaani wuxuu kobcinayaa wadarta guud ee lacagta ee Sanduuqa, taasoo u oggolaanaysa Sanduuqa inuu iibsado waligiis guryo badan, isagoo si xawli ah u koraya faylalka. REICG waa badeecad maalgashi oo waqti dheer ah taasoo kobcisa lacagta maalgashadayaasha iyada oo loo marayo qiimeynta qiimaha Sanduuqa.
Inta badan maalgashiga guryaha ayaa ah kuwo dabiici ah muddo dheerna leh xisaabaad xaddidan, laakiin REICG waxay soo saartay gaari xisaabeed si ay ugu oggolaato maal-gashadayaashu inay saamiga saamigooda ku miisaamaan.
Booqo Maaliyadeena Halkan
Maal gasho Real Estate sida qoysaska ugu taajirsan adduunka.
1% ugu sarreeya ayaa ku koray hantidooda hanti ma guurto ganacsi jiilal. Waxay heleen marin gaar ah oo ay ku iibsadaan darajada maalgashiga, ganacsiga maguurtada ah, oo ay hayaan hantidan muddada dheer.
Waxay dib u maalgashadaan inta badan dakhliga kirada si ay u galaan hanti ma guurtada ah waxayna si xooli ah u koraan hantidooda.
Waa maxay sababta loo maal galiyo A REI Capital Growth Sanduuqa Maalgelinta Guryaha Ganacsiga?
U -dhigidda lacagtaada inay kuu shaqeyso waa waddo la xaqiijiyay oo loo maro xorriyadda maaliyadeed. Ka dibna gelinta lacagtaada si aad uga shaqayso warshadaha hantida maguurtada ah waxay leedahay faa'iidooyin go'an oo gaar ah.
Maalgelinta hantida maguurtada ah waxaa loo yaqaanaa inay ka xasilloon tahay noocyo badan oo kale oo maalgelin ah gaar ahaan marka la maalgelinayo sanduuqa hantida ma guurtada ah halkaas oo xirfadlayaashu wax walba ku maareeyaan. Si kastaba ha ahaatee, dadka intooda badani waxay u maleeyaan inaad ku geli karto oo kaliya hantida maguurtada ah adiga oo dhisa ama iibsada guryaha keligaa.
A sanduuqa maalgashiga guryaha waa hal dariiqo la xaqiijiyay oo lagu galo suuqa maalgashiga hantida maguurtada ah.
Laakiin intaas ka hor, aan eegno aasaaska.
Waa Maxay Sanduuqa Maalgashiga Guryaha iyo Sidee U Shaqeeyaa?
Sanduuqa maalgashiga hantida maguurtada ah waa lacag ururin laga helo shaqsiyaad ama maalgashadayaal shirkadeed oo loogu talagalay in lagu maalgeliyo hantida ma guurtada ah. Dareenka sharciga ah, sanduuqa hantida ma guurtada ah waa hay'ad shirkadeed oo loo abuuray inay isu keento maal-gashadayaal isku fikir ah. Inta badan, Sanduuqa hantida ma guurtada ah ee ganacsiga Maraykanka maalgashadayaashu waxay kasbadaan macaash iyagoo u maraya qadarin raasumaal.
Qaar ka mid ah Faa'iidooyinka Maalgelinta Hantida Guryaha
#1: Kala Duwanaanshaha Diiwaanka
Haddii aad tahay khabiir iyo haddii kale, waxay ku noqon kartaa caqabad maalgashade celcelis ahaan inuu si sax ah u saadaaliyo isbeddelka suuqa ama hoos u dhaca inta uu maareynayo hantida sidoo kale.
Marka suuqyadu isbeddelaan, noocyada guryaha hantida ma-guurtada ah qaarkood ayaa laga yaabaa inay ka khatarsanaadaan kuwa kale. Maarayntan dusheeda, maalgelinta hal kaliya maaha laakiin guryo badan waxay noqon kartaa wax aan macquul ahayn marka laga reebo faa'iidooyinka. Waa meesha REI Capital Growth Waxay la timid waayo-aragnimo sannado ah oo ku saabsan socodsiinta iyo kobcinta sanduuqa hantida ma-guurtada ah ee ganacsiga.
#2: Barta Gelitaanka Hoose
Halkii aad ka shaqayn lahayd ilaa aad kaydsato lacag badan si aad u iibsato guryaha, Sanduuqayaga hantida maguurtada ah ee ganacsiga ee Maraykanka ayaa ku siin doona fursad aad ku bilowdo maalgelinta raasumaal hoose iyo shaqo aad u yar.
#3: Istaraatiijiyadda Maalgelinta Dadban
Markaad tixgelinayso hababka ku lug leh helitaanka, kormeerka, iyo xaqiijinta guryaha hantida ma-guurtada ah, taas oo kali ah waxay noqon kartaa shaqo waqti-buuxa ah. Sannado khibrad leh, REI Capital Growth wuu garanayaa sida saxda ah ee shaqada loo guda galo oo uu u gurto abaal-marinaha ku siinaya fursad dhab ah oo aan la dafiri karin Sanduuqayada Maalgelinta Guryaha Ganacsiga ee Ganacsiga. Waxaan qabanaa dhammaan shaqada bilow ilaa dhamaad. Mas'uuliyaddaada? Maalgashi, isku xidh, oo kori hantida jiilka sida 1% ugu sarreeya.
1% ugu sarreeya ayaa ku koray hantidooda hanti ma guurto ganacsi jiilal. Waxay heleen marin gaar ah oo ay ku iibsadaan darajada maalgashiga, dhismaha ganacsiga, iyo haysashada hantidan muddada dheer.
970 Xagaaga St.
Isniin-Jimce: 9:00 aroor - 5:00 pm EDT
Sabti-Sun: Waa xidhan yahay
Qof kastaa wuxuu noqon karaa maalgeliyaha hantida maguurtada ah ee caalamiga ah, iyada oo aan lahayn maalgashi lacageed oo badan ama khibrad hore. Ku maalgeli nooc cusub oo ah sanduuqa REI maanta!
U yeer wac
Sanduuqa Maalgashiga Dhismooyinka
Sinaanta Token bixinta
Bixinta Token Curad
© 2022 REI Capital Growth, LLC | Dhammaan Xuquuqaha Way Dhawrsan Yihiin.
"The Reinvented Funds®"Iyo"Real Estate Investing Reinvented®"Labadaba calaamado ganacsi oo ka diiwaan gashan REI Capital Management LLC.
REI Capital Management (REICM) waxay ka shaqeysaa degel internet ah oo ku yaal reicapitalgrowth.com ("Site"). Adoo adeegsanaya Bogga, waxaad aqbashaa Shuruudahayaga Adeegga iyo Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah. LACAG LACAG AMA TIXGELIN KALE AYAAN LAH XALANNAHAY, HADDII ANA LOO DIRO JAWAAB, LAMA AQBALO. TILMAAMAHA KU JIRA DANTA WAAJIBAAD AMA BILAASH nooc kasta ha ahaadee. LAGU AQBALO QAAR KAMID AH IIBSASHADA AMNIGA LAGA QAADAN KARO QAYB KA MID AH KHARASHKA Iibsiga AAN LAGU SOO QAADNAY SHIRKADA LAGU QAADO SAKADDA.QOF KASTA OO SAMEEYA SAMAYN KARO AMA LAGU CODSADO, AYAAN LAGA QAADAN AMA LAGU QAADANAYN nooc kasta, xilli kasta oo ka horreeya ogeysiiska aqbalaadda ee la bixiyo ka dib TAARIIKHDA QIIMEYNTA.
Dhammaan dammaanadaha ayaa ku lug leh khatar waxayna u horseedi karaan qayb ama wadar lumis. Annagu, annaga oo tixraacayna REICG iyo dhammaan bahwadaagta REICG, ma bixinno talo bixin cashuur ama talooyin maalgashi. Midkoodna natiijooyinka lagu sharaxay halkan ama meelkasta oo Boggan ah lama hubo lamana hubo inay damaanad qaadayaan maalgelin gaar ah ama cawaaqib cashuur. Maalgashadayaasha mustaqbalka waa inay la tashadaan la-taliyayaashooda canshuuraha shaqsiyadeed ee la xiriira cawaaqibka canshuuraha iyadoo ku saleysan duruufahooda gaarka ah. Midkoodna REICM ama midkastoo kamid ah bahwadaageeda midkoodna mas'uul kama aha cawaaqibka canshuuraha ama cawaaqibyada maalgashi ee qorshooyinka maalgashade kasta oo maalgashanaya sadaqo ay maalgeliso REICM. Farriimaha ku jira degelkan ma aha soo jeedin in la iibiyo ama la weyddiisto daneyn xagga amniga ah. Wax codsi ah kama qabanayno illaa aan ka helno dukumiintiyadayada rasmiga ah ee la bixiyo sida qoraallo meeleyn gaar ah ama rajo-gelin. Dukumiintiyadan la bixinayo waxaa laga heli karaa oo keliya bartayada "INVEST NOW".
Fadlan la wadaag goobtaada si aad u sii wadato.
Hubi our hagaha caawinta waayo info dheeraad ah.
Beddel habka buskudka
Waxaa suuro galiyay U hoggaansanaanta Kukunka ee KDP
Haddii aad diiddo cookie-ga, ma awoodi doonno in aan keydino doorbidkaaga. Tan macnaheedu waa mar kasta oo aad booqato boggaan waxaad u baahan doontaa inaad awood u yeelato ama aad kari karto mar kale cookies.